Uthini umthetho we-CAN-SPAM? | Martech Zone
Uthini umthetho we-CAN-SPAM?
NgoMvulo, Meyi 9, 2016 NgoLwesibini, Meyi 10, 2016 Douglas Karr
Imigaqo yaseMelika egubungela imiyalezo ye-imeyile yorhwebo yalawulwa ngo-2003 phantsi Umthetho weKhomishini yoRhwebo ye-Federal-CAN-SPAM. Ngelixesha elingaphezulu kweshumi leminyaka… ndisavula ibhokisi yam engenayo yonke imihla kwi-imeyile engacelwanga enolwazi olungeyonyani kwaye ingekho indlela yokuphuma. Andiqinisekanga ukuba isebenze njani na imimiselo kunye nesoyikiso sokuya kuthi ga kwi-16,000 yeedola ngolwaphulo-mthetho ngalunye.
Into enomdla kukuba, umthetho we-CAN-SPAM awufuni mvume yokuthumela i-imeyile njenge eminye imithetho yemiyalezo yorhwebo yelinye ilizwe zimisele. Into eyifunayo kukuba umamkeli unelungelo lokuba uyeke ukuthumela i-imeyile. Oku kwaziwa njengendlela yokuphuma, enikezelwa ngekhonkco lokungabhalisi elibandakanyiweyo kwi-footer ye-imeyile.
le Isikhokelo sokuqala kwi-CAN-SPAM Act evela kwi-EverCloud iya kukunika lonke ulwazi oludingayo ukuze uqiniseke ukuba uthobela umthetho.
Iimfuneko eziphambili zoMthetho we-CAN-SPAM:
Sukusebenzisa ulwazi lwentloko okanye olulahlekisayo. "Ukusuka," "Ukuya", "Ukuphendula-Kuwe," kunye nokuhambisa ulwazi-kubandakanya igama lesizinda kunye nedilesi ye-imeyile- kufuneka zichaneke kwaye zichonge umntu okanye ishishini eliqale umyalezo.
Sukusebenzisa imigca yesifundo esikhohlisayo. Umxholo womxholo kufuneka ubonakalise ngokuchanekileyo umxholo womyalezo.
Chonga umyalezo njengentengiso. Umthetho ukukunika inkululeko eninzi yokwenza oku, kodwa kufuneka uxele ngokucacileyo nangokucacileyo ukuba umyalezo wakho sisibhengezo.
Xelela abamkeli apho ukhoyo. Umyalezo wakho kufuneka ubandakanye idilesi yakho yeposi esebenzayo. Le isenokuba yidilesi yakho yangoku yesitalato, ibhokisi yeposi oyibhalisileyo kwiNkonzo Yeposi yaseMelika, okanye ibhokisi yemeyile yabucala oyibhalisileyo ngearhente yokufumana iposi yorhwebo esekwe phantsi kwemigaqo yePosi.
Xelela abamkeli ukuba baphume njani ekufumaneni i-imeyile yexesha elizayo evela kuwe. Umyalezo wakho kufuneka ubandakanye inkcazo ecacileyo necacileyo yendlela umamkeli anokukhetha ngayo ukufumana i-imeyile kuwe kwixa elizayo. Yenza isaziso ngendlela ekulula ukuba umntu oqhelekileyo ayiqaphele, ayifunde kwaye ayiqonde. Ukusetyenziswa koyilo kobungakanani bohlobo, umbala, kunye nendawo kunokuphucula ukucaca. Nika idilesi ye-imeyile yokubuyisa okanye enye indlela elula esekwe kwi-Intanethi yokuvumela abantu ukuba banxibelelane nokukhetha kwabo kuwe. Unokwenza imenyu ukuvumela umamkeli ukuba aphume kwiintlobo ezithile zemiyalezo, kodwa kufuneka ubandakanye ukhetho lokumisa yonke imiyalezo yorhwebo evela kuwe. Qiniseka ukuba isihluzo sakho sogaxekile asizithinteli ezi zicelo zokuphuma.
Hlonipha izicelo zokuphuma ngokukhawuleza. Nayiphi na indlela yokuphuma oyinikelayo kufuneka ikwazi ukuqhubekeka nezicelo zokuphuma iintsuku ezingama-30 ubuncinci emva kokuba uthumele umyalezo wakho. Kuya kufuneka uhloniphe isicelo sokuphuma sommkeli ngaphakathi kweentsuku ezili-10 zeshishini. Awunakho ukuhlawulisa umrhumo, ufuna ukuba ummkeli akunike naluphi na ulwazi oluchonga ngaphaya kwedilesi ye-imeyile, okanye umamkele athathe naliphi na inyathelo ngaphandle kokuthumela impendulo nge-imeyile okanye ngokundwendwela iphepha elinye kwiwebhusayithi ye-Intanethi njengemeko yokuhlonipha isicelo sokuphuma. Nje ukuba abantu bakuxelele ukuba abafuni kufumana eminye imiyalezo evela kuwe, ngekhe uthengise okanye ugqithise iidilesi zabo ze-imeyile, nokuba ziluhlu luluhlu lweposi. Ukuphela kwento eyahlukileyo kukuba ungadlulisela iidilesi kwinkampani oyiqeshileyo ukukunceda uthobele umthetho we-CAN-SPAM.
Jonga okwenziwa ngabanye egameni lakho. Umthetho uyenza icace into yokuba nokuba uqeshe enye inkampani ukuba iphathe ukuthengisa nge-imeyile, awunakho ukophula uxanduva lwakho olusemthethweni lokuthobela umthetho. Zombini inkampani ezinemveliso eyonyuselweyo kumyalezo kunye nenkampani ehambisa umyalezo inokuthi ibenoxanduva ngokusemthethweni.
Ukuqinisekisa ukuba uyayithobela imithetho ye-CAN-SPAM linyathelo lokuqala lokufumana ii-imeyile zakho ngokucoca i-imeyile nakwibhokisi yabangenayo. Ukuthotyelwa kwe-CAN-SPAM akuthethi ukuba i-imeyile yakho iya kuyenza kwibhokisi engenayo, nangona! Usenokungabikho kuluhlu lwabamnyama kwaye uvaliwe, okanye uthunyelwe ngqo kwifolda ye-junk kuxhomekeke kukuhambisa kwakho, igama, kunye nokubekwa ebhokisini. Uya kudinga isixhobo somntu wesithathu njenge 250ok ngalo nto!
tags: Unokwenza ugaxekileugaxekile-spamImiyalezo yorhweboikhomishini yorhwebo yomdibanisoftcPhuma kuyoIsihluzi sogaxekileizohlwayo zogaxekileii-imeyile zentengiselwanoinkonzo yeposiyintoni isenzo sogaxekile
Igophe leBenchmark Curve kugcino lomsebenzisi wosetyenziso lwefowuni
Yintoni ekufuneka bayazi abathengisi malunga nokuKhusela iLungelo leNgqondo